Abahlinzeki Bempahla Yokusebenza Yokhonkolo kanye neFektri - Abakhiqizi Bezinto Zekhonkolo Bekhonkolo
Lesi sitshalo sakhiwa uhlelo lokubhaka, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokulawula umoya womoya nokunye. Ama-aggregates amathathu, impushana eyodwa, okufakiwe okuketshezi okukodwa namanzi kungenziwa kukalwe ngokuzenzekelayo kuhlanganiswe nesitshalo.
Lesi sitshalo sakhiwa uhlelo lokubhaka, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokulawula umoya womoya nokunye okuhlanganisiwe, izimpushana, okufakwayo oketshezi namanzi kungenziwa kukalwe ngokuzenzekelayo kuhlanganiswe nesitshalo.
Isisekelo sesakhiwo samahhala, imishini ingafakwa ekukhiqizweni ngemuva kokuthi indawo yokusebenza ilinganiswe futhi iqine. Hhayi nje ukunciphisa izindleko zokwakhiwa kwesisekelo, kepha futhi unciphise umjikelezo wokufaka
Isitimela sokubhaka ukhonkolo esinejubane eliphezulu
Ukwamukela umxube osebenza kahle kakhulu, ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu, ukusekela izinhlobo eziningi zobuchwepheshe bokuphakela, efanelekile ngezidingo ezahlukahlukene zokuxubana kokhonkolo, amabhodi wokufaka kanye namabhande amukela okokusebenza kokumelana nengxubevange, ngempilo yesevisi ende.
Kukufanele ukukhiqizwa kokwakhiwa kwamanzi, futhi isakhiwo esikhethekile sihlangabezana nezidingo zamanzi ezungezile.